Arday dhameysatay barashada kitaabka Arbaciin Al-nawawi oo la abaalmariyay | Radio Iftin
Arday dhameysatay barashada kitaabka Arbaciin Al-nawawi oo la abaalmariyay
(Saturday, March 21, 2015)- Xaflad lagu abaalmarinayay arday dhameysatay barashada Kitaabka Arbaciin Al-nawawi oo ay ka qeyb galeen culimaa’udiin iyo waalidiinta ardayda dhashay ayaa lagu qabtay Masjiska Al-taqwa ee degmada Kaxda.
Ardayda ayaa loo qabtay tartan aqooneed ku saasan cilmiga ay ka barteen kitaabka, waxaana macalimiintu ay mid mid u weeydiiyeen arday su’aallo la xariirta kitaabka Arbaciinka ah oo muda afar bilood ah ay baranayeen.
Munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay Sheekh Axmed Maxamed Xuseen (Sheekh Axmed Mowliid) oo ku dhawaaqay natiijada tartanta iyo magacyada ardaydii kaalimaha hore ka galay tartanka. Waxaana ay noqdeen 6 arday oo ku soo baxay tartarnka oo kala ah .
Kaalinta 1aad . Cabdirisaaq Axmed
kaalinta 2 aad. Cabdi Maalik Sheekh Bashiir
kaalin 3 aad. Maxamed Deeq Maxamuud
Kaalinta 4 aad Cabdisalaan Maxamuud Maxamed
kaalinta 5aad . Muuse sheikh Cabdisamad.
kaalinta 6 aad Maxamed Macalin Ibraahiim .
Munaasabada ayaa waxaa hadiyado kala duwan la guddoonsiiyay Ardaydii galay kaalimaha hore ee tartatanka, aydoo Ardaydii kale ee aan kaalimaha ka galin Tartanka Macalimiintu ay ku dhiirigalayeen inay ku daydaan Ardayda maanta gashay Kaalimaha hore.
Sheekh Cabdulqaadir Yuusuf oo gabo gabadii ka hadlay xafladda ayaa ka sheekeeyay muhiimadda ay leedhaday in lagu tartamo diinta Islaamka, waxaana uu ku boogaadiyay ardayda inay ku dadaalaan barashada diinta Islaamka, isagoo waalidiinta Soomaaliyeed ujeediyay in caruurtooda ay ku barbaariyaan barashada ku dhaqanka diinta Islaamka.